'जेरी'ले जुराएको जोडी- अनमोल र अन्ना । – Namaste Filmy
सहरमा यतिबेला अनमोल केसी र अन्ना शर्माको जोडी चर्चामा छ । १९ वर्षीय अनमोल र उनी भन्दा तीन वर्ष कान्छी अन्नाको ‘जेरी’ जोडीले खासगरी योंगस्टरलाई हलसम्म तानिरहेका छन् । अनमोलले यसअघि ‘होस्टेल’ बाट नै योंगस्टरमा आफ्नो क्रेज देखाइसकेका भए पनि अन्नाको भने ‘जेरी’ डेब्यु हो । यतिबेला फिल्मले पाएको सफलताले उनी पनि पुलकित भएकी छन् । सानैदेखि पापाराजी फेम मन पराउने अन्नालाई हलिउड पुगेर लाइमलाइटमा आउन पाए भन्ने सोच पनि आउँथ्यो रे । ‘त्यो सोच मात्रै हो । तर अहिले त नेपाली फिल्म पनि पहिलेभन्दा एकदमै विकास भएको छ ।’ खास नाम अन्नपूर्णलाई छोट्याएर अन्ना लेख्ने उनी ‘जेरी’ जस्तै राम्राे फिल्मको अफर आएमा अरू पनि गर्ने बताउँछिन् । तत्कालका लागि भने उनलाई त्यस्ता अफर आएका रहेनछन् ।
मनाङको लोकेसन, एक्टरको गेटअप, सिनेमाटोग्राफी जस्ता कारणले अन्ना ‘जेरी’ अलिकति भए पनि हलिउडसँग तुलना गर्न सकिने ठान्छिन् । ‘अरू नेपाली फिल्मलाई मैले नराम्रो भन्न खोजेको हैन । तर अरू भन्दा यो बिल्कुलै भिन्न छ,’ सायद अन्नाको धारणालाई यतिबेला दर्शकले पनि अनुमोदन गरिदिएका छन् । जेनिफर लरेन्स जस्तो न्याचुरल एक्ट्रेस मन रुचाउने अन्ना बलिउडमा दीपिका पादुकोण मन पराउँदी रहिछन् । एक्टरमा ? ‘अनमोल केसी,’ शनिबार अनमोलसँगै भेटिएकी अन्नाले अपेक्षित जवाफ फर्काइन् । यतिबेला उनीहरू रिल हुँदै रियल लाइफका पनि असल जोडी हुन् । ‘जेरी’ खेल्नुको उपलब्धि अन्नाका लागि अनमोल पनि रहेछन् । अनमोललाई उनले कस्तो बुझेकी छन् त ? भन्छिन्, ‘मलाई केटा मान्छे मनपर्ने उसको पर्सनालिटीले हो । उसको त्यो एकदमै राम्रो छ । अनमोलको यही कुराले नै मलाई पहिलोपटक अट्रयाक्ट गरेको हो । उसमा मान्छेलाई आदर, सम्मान गर्ने गुण छ ।’ फिल्म खेल्नुअघिसम्म भने उनले अनमोललाई चिनेकी पनि थिइनन् रे । तर छोटो अवधिमै दुई एकदम घनिष्ट बनिसकेका छन् । सुपरस्टारको लाइनमा लागिरहेका अनमोलका लागि भने अन्नाका केही टिप्स छन् । ‘उसको लुक्स राम्रो छ । हाइट छ । एक्टिङ स्किल्स पनि राम्रो गर्छ । खासमा ऊ ओभरअल प्याकेज हो । मैले उसका दुवै फिल्म हेरें । एक्टिङमा अझै धेरै वर्कआउट गर्न जरुरी छ । यसको अर्थ ऊ खराब एक्टर भन्न खोजेकी हैन । दोस्रो, उसले संवादमा सुधार्नुपर्छ होला । नेपाली शब्द उच्चारणमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ आफूलाई बुक्स लभर मान्ने अन्ना अनमोलका लागि पनि धेरै भन्दा धेरै बुक पढ्न सल्लाह दिन्छिन् । ‘म एकदमै धेरै बुक पढ्छु । त्यसले कुनै पनि कुरालाई धेरै दृष्टिकोणले सोच्ने क्ष्ामता दिन्छ । सोचमा व्यापकता आउँछ । अनमोलमा अलि त्यसको कमी पाएकी छु । त्यसैले उसले धेरै भन्दा धेरै बुक्स पढोस्,’ त्यसो त अन्नालाई पनि फिल्म खेलेर जीवनको तह नै माथि पुगेको भान भइरहेको छ । भन्छिन्, ‘धेरै मान्छेसँग इन्टरयाक्ट गर्न सिकें । मिडियालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने जानें । यो फिल्म गरेपछि म ओप्पन टक गर्न सक्ने भएँ । पहिले एकदमै डिपेन्डेन्ट, मान्छेसँग नबोल्ने, चुप लागेर बस्ने, रिजभ्र्ड पर्सन थिएँ । तर अहिले एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट भएकी छु ।’ यतिबेला ब्याकटुब्याक सफल फिल्म दिएपछि अनमोलमा पनि जिम्मेवारीबोध भएको रहेछ । ‘फिल्म ‘होस्टेल’ पछिको एक वर्षमा जति पनि फिल्मको अफर आयो, त्यो सबै गरेको भए सायद करोडपति हुन्थें होला । तर मलाई पैसाभन्दा पनि जुन नाम बनेको छ, त्यसलाई नै जोगाएर अगाडि बढ्नु छ,’ अनमोलले थपे, ‘अहिले चाहिँ म योंगस्टर्स टार्गेट क्यारेक्टरमै फोकस हुन्छु । उमेर हुँदै गएपछि फेसमा म्याचुअरनेस आउला । त्यो क्यारेक्टर गर्न मसँग पछि धेरै टाइम हुनेछ । तर अहिलेको पाँच वर्ष चाहिँ योंगस्टर्स क्यारेक्टरमै फोकस हुनेछु । जुन पछि मैले लाइफमा कहिल्यै गर्न पाउन्नँ ।’ उनी आफैंलाई ऐनामा हेरेर सुहाउँदो क्यारेक्टरमा मात्रै फिल्म खेल्ने बताउँछन् । ‘कसैले मलाई एकदमै राम्रो स्कृप्टको राम्रो क्यारेक्टरका लागि अफर गर्‍यो तर त्यो मेरा लागि सुहाउँदैन भने म गर्दिनँ,’ त्यसो त उनी अझै आफूलाई अपरिपक्व नै ठान्दै भन्छन्, ‘उमेरकै कारणले पनि म त्यति साह्रो बुझ्ने भइसकेको छैन । तर म आफूलाई सुधार्दै लानेछु ।’
फ्यानहरू प्रायः अनमोलमा देखिने कोरियन लुक्सका कारण पनि क्रेजी छन् । अन्ना पनि अनमोलको लुक्स, हाइट र ड्रेस सेन्सका कारण केटी फ्यान फलोइङ रहेको जिकिर गर्छिन् । तर अनमोल भने आफ्नो दिमागको फ्यान हुन् रे । ‘मलाई मेरो दिमाग नै मनपर्छ । किनभने सोचबाटै सबैकुरा देखिन्छ,’ अन्ना पनि अनमोलको कुरामा शतप्रतिशत सहमत रहिछन् । तर अनमोलले आफ्नै नाममा हात काटेर फोटो पठाउने फ्यान पनि देखेका छन् र सार्वजनिक ठाउँमै प्रेमप्रस्ताव गर्नेको सामना पनि गरेका छन् । ‘म आफ्ना फ्यानलाई कहिल्यै पनि लभरको रूपमा हेर्दिनँ । उहाँहरूले मलाई आई लभ यू भन्दा कहिल्यै पनि आई लभ यू टू भन्दिनँ । थ्यांक यू भनेर रिप्लाई दिन्छु,’ त्यसो त उनी यतिबेला प्रेमको चक्करमा नपरी करिअर स्थापित गर्नमा ध्यान दिने पक्षमा रहेछन् । पुनः उनी निर्देशक हेमराज बीसीसँग ह्याटि्रक फिल्म गर्दै छन् जसमा एन्टी हिरोको रूपमा एक ग्याङस्टारको रूपमा देखिने भएका छन् । जसको हिरोइन फाइनल भइसकेको छैन । अन्नालाई पुनः अनमोलको को-स्टारको प्रस्ताव आएमा ? उनी भन्छिन्, ‘नो ।’ किन ? ‘मैले उसका लागि फिल्म खेलेको हैन । गरें भने म आफ्नै लागि गर्ने हो ।’
अजय देवगणलाई 'डान ब्ल्याक बेल्ट' सम्मान ।